Jesus Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise Ciise
Ma arrinta haddii Ciise Rose?
Well, innagu waxaynu nahay agagaarka wakhtigaas ee sannadka. Mid ka mid ah laba jeer badan oo naga mid ah kaniisadda aadaa our hooyo ee, ama on a joog Easter fiican iyo madaxa in dhismo kaniisad ku dhow. Waan ogahay qaar ka mid ah y'all ee hore u leedahay in aad isku joog Easter iyo dharka gaaray baxay.
Waxa ay u muuqataa qof walba uu helo ka qeyb qaadataa in xaflado ah. Christmas iyo Easter waa jeer oo xiiso leh sanad kuwa marka xitaa dadka caadiga ah ma daryeeli oo ku saabsan Ciise ka qayb qaataan hab qaar ka mid ah. Waxaa jira ukunta Easter iyo nacnac Easter for sale meel kasta. Waxaa jira barnaamijyo Easter, iyo maraan. Easter qaadataa in ka badan in yar oo ah, in kastoo qaar badan oo aan rumaysan in sheekada Easter.
Ma ahan la yaab, in kastoo maxaa yeelay, Easter iyo Christmas u noqday xafladaha dhaqanka. Waxay galay wax yar ka badan fasaxyada qaranka jeestay, reeraha, iyo fursado dukaano inuu lacag badan qaar ka mid ah. Dabcan, kuwa rumeeyey ee dhalashada iyo dhimashada Masiixa dabaal degaan, laakiin ma uu baahan yahay.
Waxaan xasuustaa qoyskeyga korayaan tegi lahaa oo dhan maqnaan Easter. lahaa waxaan si suuqa tago toddobaadka ka hor iyo ka qaado sawir la Bakeylaha ah. Waxaan shakhsiyan qabaa in uu yahay creepiest oo dhan mascots fasaxa. toosaa A…
Waayo, dadka Masiixiyiinta ah, su'aashu waxay tahay ma in aan jirrabaadda wajihi doonaan, laakiin sida aan u jawaabi doonaa marka aan samayn. In Luke 4:1-2, waxaan ka akhrisan ku saabsan jirrabaadda Ciise iyo sida uu ku jawaabay. Halkan audio ka khudbad kooban oo aan idinku wacdiyey on marinka in aan kaniisadda dhowr bilood ka dib. Waxaan doonayay in ay eegaan jirrabaadda Ciise ', milicsato adeecaan, oo ka feker waxa aan ka baran karno goobta this. Maxay yihiin waxyaalaha waa Annagu waxaannu xusuusan nahay in times of jirrabaadda? Halkan waxaa ku qoran qodobada muhiimka ah:
waxaan. Ilaah Kuu ogolaanayaa iyo Isticmaalo Duufsado sida Qayb ka mid ah oo Plan
II. Tabar ma aha waa marmarsiinyo ay uga sii In si Duufsado
III. Jirrabi hore loo Adkaaday
Duufsado Ciise by BragOnMyLord
Waan ku baryayaaye, waa dhiirigelin ah in aad
Waxaan ku Qaadataa, Markaasuu, Gaalnimada Taasi In Ciise
Baan ku qaadan, ka dibna, rumaysadla'aantooda in Ciise (MA Ciise rumaysatay) waxaa ka jeedsan Ciise si uu u doondoono qanacsan in waxyaabo kale. Iyo rumaysadka xagga Ciise baa imanaysa in Ciise ku qanacsan baahida guriga iyo waxay ku.
CAQIIDADA ma aha inta heshiis la xaqiiqooyinka in madaxa; waxaa inta badan waa rabitaanka cuntada ah ee wadnaha oo masaamiir ku saabsan Ciise qanacsanaanta. [Ciise wuxuu ku yidhi,] 'Kii ii yimaadaa ma gaajoon doonaan, oo kii i rumaystaa weligii ma harraadi doono!'